मानिसमा पहिलो पटक यसरी गरिएको थियो लंगुर बाँदरको मुटु प्रत्यारोपण - Birgunj Sanjalमानिसमा पहिलो पटक यसरी गरिएको थियो लंगुर बाँदरको मुटु प्रत्यारोपण - Birgunj Sanjalमानिसमा पहिलो पटक यसरी गरिएको थियो लंगुर बाँदरको मुटु प्रत्यारोपण - Birgunj Sanjal
मानिसमा पहिलो पटक यसरी गरिएको थियो लंगुर बाँदरको मुटु प्रत्यारोपण
११ कार्तिक २०७६, सोमबार ०७:४२
एजेन्सी । विज्ञानले असम्भव कुरालाई सम्भव बनाइ दिएको छ । आज हामीले एक रोचक घटनाका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौँ । आज भन्दा ३५ वर्ष पहिले सन् १९८४ मा एक बालिकामा लंगुर बाँदरको मुटु प्रत्यारोपण गरिएको थियो । बालिकाको नाम फाय थियो । आज हामीले लंगुरको मुटु लगाउने बालिकालाई कस्तो भयो ? भन्ने बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्न लागेका छौँ ।
Baby Stephanie Fae, became the first infant to receive an organ (a heart) from another Species (fromababoon) on the 26th of October 1984. Although the operation was successful, baby Fae’s body rejected the heart, and she died 20 days later.
11:39 AM – Oct 26, 2019
See Adejumo Seyi’s other Tweets
१४ अक्टोबर १९८४मा एक बालिकाको जन्म भयो । उनको नाम स्टेफनी फे बेइक्वायर रहेको थियो । उनलाई फाय नामले चिन्ने गरिन्छ । यी बालिकाको जन्म ‘हाइपोप्लाष्टिक लेफ्ट हाटै सिन्ड्रोम’सँग भयो । यो दुर्लभ जन्मजात हृदयरोग हो । यो रोगका कारण बिरामीको मुटुको बायाँ भाग अविकसित हुन्छ ।
यो दुर्लभ रोग लागेका बालबालिका दुई हप्तासम्म मात्र जीवित रहन्छन् । तर फायलाई लंगुर बाँदरको मुटु प्रत्यारोपणपछि उनी धेरै जीवित रहिन् ।
फायको शल्यक्रिया गरेको ३५ वर्ष पुगेको छ । डा.लियोनार्ड बेलीले बालिकाको रोग पहिचान गरेपछि चिकित्सा विज्ञानमा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिए । बालिकाको परिवारसँग पनि मृत्यु कुर्ने वा डा. बेलीले अप्नाउन खोजेको लंगुर बाँदरको मुटु प्रत्यारोपण गर्नु ।
फायको स्वास्थ्य अवस्था मुटु बाहेक सबै सामान्य थियो । चिकित्सकले मुटु प्रत्यारोपणले बालिकालाई ठिक गर्छ भन्ने विश्वास लिएका थिए । त्यसो त एक मानवको मुटु अर्को मानवमा प्रत्यारोपण त्यसअघि अर्थात सन् १९६७ मा सुरु भएको थियो ।
तर फायका लागि मानव मुटु प्रत्यारोपण सम्भव थिएन् । उनी सानी भएकाले मुटु प्रत्यारोपण सम्भव नभएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । त्यो बेलासम्म नवजात शिशुको मुटु प्रत्यारोपण भएकै थिएन ।
मुटुरोग विशेषज्ञ डा. बेलीको मस्तिष्कमा नयाँ विकल्प चलिरहेको थियो । उनले बालिकामा जनावरको मुटु प्रत्यारोपणका बारेमा सोचिरहेका थिए । उनले अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाको लिण्डा विश्व विद्यालयमा यहीँ विषयमा अनुसन्धान गरेका थिए । उनले भेडा, बाख्रा र लगूंर बाँदरबीचमा १ सय ५० भन्दा धेरै पटक मुटु प्रत्यारोपण गरेका थिए ।
सन् १९६४ मा एक मानिसमा पहिलो पटक जनावरको मुटु प्रत्यारोपणको तयारी भएको थियो । तर त्यो काम सफल भएन । बिरामीको मृत्यु भएको थियो । डा. बेलीले त्यो बीचमा पनि मुटु प्रत्यारोपणका विषयमा धेरै अनुसन्धान गरे ।
बालिका फाय १२ दिनकी थिइन् । उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिन थाल्यो । २६ अक्टोबर सन् १९८४मा चिकित्सकको टोलीले फायलाई लंगुरको मुटु प्रत्यारोपण गर्न सफल भए । फायको शरीरमा लंगुरको मुटु धड्कन थाल्यो ।
चिकित्सक र बिरामीका आफन्तलाई मात्र नभएर संसार भर यो नयाँ चमत्कारको रुपमा रह्यो । बेबी फायका बारेमा संसारभरका सञ्चारमाध्यमको चासो बढ्यो । संसार भरका मानिसले फायको स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गरे ।
पहिलो पटक मानवमा जनावरको मुटु प्रत्यारोपण गरिएको १४ दिनपछि बालिका फायको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्यो । १४ नोभेम्बर सन् १९८४ मा फायले संसार छाडिन् । त्यसपछि भने विज्ञानले धेरै कुराको सफलता प्राप्त गरेको छ ।
फायका लागि लंगुरको मुटु प्रत्यारोपणले संसारको ध्यान खिचेको थियो । मेडिकल साइन्सका लागि त यो सबैभन्दा ठूलो सफलता हो । चिकित्सकहरुले अहिले पनि यो घटना सम्झिने गरेका छन् ।